トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Rakuten kadhi wokurarama chikwereti | chimbadzo basa Masvomhu uye pfungwa, rokusunungura nzira, etc.
The Rakuten kadhi, kune marudzi matatu wokurarama chikwereti kuti "wokurarama mbiri panguva kunotenga," "post-ribonucleic" "Auto ribonucleic". Pose wokurarama mbiri, nokuti features, akadai sei kushandisa akasiyana, ngatitangei zvakasimba chisimbiso. How kushandisa "wokurarama mbiri panguva kunotenga" wokurarama chikwereti
kunotenga, chete kuudza "mu wokurarama chikwereti" panguva kutenga chigadzirwa. Nekuti hapana chikonzero chokutya nechimwe zvekufamba, zvazova nzira kusarudza nyore wokurarama chikwereti.
"post-ribonucleic" ndiko, mari yakashandiswa sezvo bundu Nemutengo kana bhonasi bundu Muchidimbu, iri basa kuti kuva anogona kushandurwa muna wokurarama chikwereti pa nyore yenyu. Vose kushandiswa munokosha kwete chete vanogona kuchinja mu wokurarama zvikwereti, zvingadarowo kuti kushandura chikamu anowanika uwandu mu wokurarama chikwereti.
Specification iripo kunyange pashure pokusimbisa chinhu chinowanika, kana zviri mukati memazuva 20 okutambirwa pamusoro Specification, anogona kuchinja maererano nzira. Kutsauka rikaitika chemhosva plan, zvakadai pakarepo mari, rinobatsirawo kana muripo unoitwa kunoparirwa mu bundu Verengai.
bhuku | ribonucleic kunozoitwa | zvakanakira nekuipira
"Auto ribonucleic", unofanira kwerubwinyo rwakagara rwuripo kunyoresa, asi basa kuti kunotenga pashure kunyoresa iri kwaita wokurarama chikwereti . Sezvo vose mari uchishandisa Rakuten kadhi iri anenge kugara pa pamwedzi, mhuri zvakanaka uchava vasununguka.
bhuku | Auto ribonucleic A | zvakanakira nekuipira
Rakuten kadhi wokurarama chikwereti basa kukarukureta uye muripo huwandu Notes
Rakuten kadhi wokurarama zvikwereti iri, panyaya Yen asingasviki mamiriyoni 20 vanoshandisa nengaidzo pamwedzi 5,000 Yen, vanopfuura 200,000 Yen yakatogadzirwa kusvika 10,000 Yen pamwedzi. Uye mari ndinoiitawo wokurarama zvikwereti mari yechikoro, achava mari chaiyo wakasuduruka.
For Rakuten kadhi wokurarama zvikwereti mari yechikoro, "nouchapupu mwero 15 pagore. Zviri 00 muzana ". Somuenzaniso, kana pachiyero iri 50,000 Yen kuguma romwedzi, dzemaitirwe payakavakirwa chomurayiro vachava "50,000 (pachiyero) × 15,0% ÷ 12 = 625 Yen". Nemamwe mashoko, inotevera romwedzi muripo vachava "5,000 Yen + nekutumwa 625 Yen = 5.625 Yen".
Kana yausina vatsva kunotenga, mberi chinotevera mwedzi chomurayiro ndiko kuti ave "45,000 (pachiyero) × 15,0% ÷ 12 = 562 Yen", muripo yakawandisa "5,000 Yen Tasu562 Yen = 5.562 Yen".
tevera pamwedzi muripo inogona dzaona nokuda chete kukarukureta nzira. Kana pachiyero iri muripo yakawedzera zvikuru, zvingadarowo kuwedzera kuripwa wokurarama mbiri parutivi nzira.
rinotaura kuti nzira abhadhare uye kuwedzera itsva kushandiswa nokungwarira
kuona kuti anova refu, sezvo abhadhare iri kunonoka awanike munyika itsva, ndiko kuti muripo zvakare kwaizowedzera iroro chitsama basa. Kana uchifunga kuti iwe "akanga akawandisa", kubva "Rakuten e-NAVI" pamusoro Rakuten kadhi pamutemo Website, zvizere kana chikamu kana mutsividzo wokurarama zvikwereti nepakati, unogona kubvisa nzira kuti zvaitika wokurarama chikwereti. Zviri 562 Yen ".
kuona kuti anova refu, sezvo abhadhare iri kunonoka awanike munyika itsva, ndiko kuti muripo zvakare kwaizowedzera iroro chitsama basa. Kana uchifunga kuti iwe "akanga akawandisa", kubva "Rakuten e-NAVI" pamusoro Rakuten kadhi pamutemo Website, zvizere kana chikamu kana mutsividzo wokurarama zvikwereti nepakati, unogona kubvisa nzira kuti zvaitika wokurarama chikwereti.